Naya Post Nepal | एमसीसी बारे भीम रावल र बाबुरामबीच घम्साघम्सी, रावलकाे पीएचडी नक्कली
एमसीसी बारे भीम रावल र बाबुरामबीच घम्साघम्सी, रावलकाे पीएचडी नक्कली
काठमाडौँ । अमेरि’की सहयोग परियो’जना एम’सी’सी लाई लिएर दुई ‘डाक्टर’ नेता बीच सामाजिक सञ्जाल मा जुहारी चलेको छ । पूर्व प्रधान मन्त्री एवं जनता समाज वादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबु राम भट्टराई र एमाले नेता डा. भीम रावल बीच आरोप प्रत्या’रोप चलेको हो ।
डा. भट्ट राईले आफू माथि गलत आरोप लगाए को भन्दै डा. रावल को पीएचडी कतै नक्क’ली त हैन भनी आशंका गरे’का छन् । सामा’जिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत नेता लेख्दै डा भट्टराई’ले आफू प्रधान मन्त्री भए का बेला एम सी सी सम्झौता भए को भनेर डा रावल ले ग’लत आ’रोप लगाए को बताए ।
उनले भने’का छन्, ‘यी कण भीम रावल ले पीएचडी गरे को भनेर नाउँ को अगाडि डा. पनि झुन्ड्याउँ’छन्, विद्यावा’रिधि गर्दा कसै बारे कुनै दाबी गरियो भने त्यस को स्रोत, मिति र स्थान खुलाउनु पर्छ ।
उनले दाबी गरे जस्तो बाबु राम ले गोप्य रूप मा एम सी सी सम्झौता गरे को ? हो भने कहिले, कहाँ, कसरी खु’लाउनु पर्दैन ? कि यी नक्कली पीएचडी हुन् ?’
त्यस अघि डा रावल ले सांसद हरू लाई स्मृति पत्र भन्दै एक सन्देश जारी गरेका थिए, जसमा डा भट्ट राई ले गोप्य रुपमा एम सी सी सम्झौता गराए को आरोप समेत थियो ।
उनले भने का थिए, ‘हामी संवि’धान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया को काम टुंगो लगाउन मै व्यस्त थियौं, बाबु रामले गोप्य रूप मा एम सी सी सम्झौता गर्नु भए को हो ।
त्यो प्रति निधि सभामा पेस भए पछि मात्रै एमसीसीबारे मैले थाहा पाएको हुँ ।’ बाबु राम ले गाेप्य रूप मा सम्झाैता गरेकाे भन्ने डा रावल काे आ’रोप तथ्य’सहित पुष्टि गर्न उनले चु’नाैती दिए का छन् । यो समाचार news24nepal मा छ ।
२०७८ माघ १८, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 198 Views